Ikhaya / Blog / Ingxelo ye-2020 yaseMelika yokuHamba kweGumbi lokuhlambela: Izindlu zangasese eziSmart, ii-Faucets zeSensor, kunye neKhabinethi yoKuhlambela yangasese iya kuduma!
2020 / 11 / 02 uhleloBlog 598 0
I-HOUZZ, iwebhusayithi yeenkonzo zamakhaya zase-US, ikhupha isifundo sonyaka sendlela yokuhlambela yase-US, kunye nohlobo lowe-2020 lwengxelo ekugqibeleni lukhutshiwe. Kulo nyaka, i-HOUZZ yenze uvavanyo kubanini bamakhaya baseMelika abali-1,594 abasandula ukuvuselela izindlu zabo zangasese kunyaka ophelileyo malunga nokuba zeziphi iimveliso abazikhethileyo kunye notshintsho abalwenzileyo xa besenza njalo. Iziphumo zinokushwankathelwa ngolu hlobo lulandelayo: Ukuphumla noLonwabo, i-High-Tech, iiNdawo zokuKhanyisa, udonga lweAccent, uMxube waManje, kunye nokunye.
- Iimveliso zegumbi lokuhlambela -
OnUkuguqulwa kweebhafu ukuya kwiishawa
Inani elikhulayo labanini bamakhaya baseMelika bajonga igumbi lokuhlambela njengendawo yokuphumla, kunye neepesenti ezingama-41 zabanini bamakhaya abali-1,594 abathi baphola kwaye baphumla kwigumbi lokuhlambela. Ezona ndlela ziphambili zokuphumla kukuntywila kunye nokuhlamba, ngeepesenti ezingama-55 zabaphenduli abathi ukuntywila ebhafini kuyabanceda baphumle.
Ngelixa umsebenzi wokuphumla weebhafu uqatshelwa, ngaphezulu kweepesenti ezingama-50 zabaphenduli abahlaziye izindlu zabo zokuhlambela kulo nyaka abakazisebenzisi iibhafu zabo, kwaye iipesenti ezingama-23 bade bathi bazisusile. Kwaye kwabo baphendulileyo abakhethe ukususa iibhafu zabo, i-fourths bakhetha ukutshintshela kwindawo yokuhlamba endaweni yoko, nge-54 yepesenti yokuxela eyonyusa ubungakanani beentloko zabo zeshawari, ukusuka ekutshintsheni ubume bendawo yokuhlambela (iipesenti ezingama-45) kunye nokonyusa ubungakanani begumbi labo lokuhlambela (Iipesenti ezingama-20).
Abantu abaninzi bakhetha iikhabhathi zangasese zesiko
Phakathi kwabo bakhetha ukubuyisela iikhabhathi zabo zokuhlambela, i-36% ikhethe iikhabhathi zangasese ezisesikweni kwaye enye i-21% ikhethe iikhabhathi zangasese ezinesiqhelo, ebonisa inyani yokuba iikhabhathi zangasese zesiko nazo ziqala ukungena kwimakethi yase-US, ngelixa i-28% ikhethe iikhabhathi indawo yokugcina engaphezulu. Ngokwesitayile sekhabhathi yokuhlambela, i-56% yabaphenduli bakhetha iikhabhathi ezakhelwe ngaphakathi kwigumbi lokuhlambela, zilandelwa kukuma ngokukhululekileyo (28%) kunye nodonga olubekwe eludongeni (15%), ngenani labaphenduli abakhetha iimveliso ezibekwe eludongeni ezonyuka ngamanqaku eepesenti ezi-4.
Izindlu zangasese eziSmart zazidume ngakumbi.
Kulo nyaka, iipesenti ezili-17 zabanini bamakhaya baseMelika abakhethe ukutshintshela kwindlu yangasese ngombhobho, banyuka ngepesenti ezi-5 ukusuka kunyaka ophelileyo; Iipesenti ezili-14 kunye neepesenti ezili-13 zabaphenduli, ngokulandelanayo, bakhethe izindlu zangasese ezineempawu zokuzicoca kunye nezihlalo ezishushu, ezikwanazo nezindlu zangasese ezifanelekileyo. Ukongeza, anti-splash, ukukhanya okwakhelwe-ngaphakathi ebusuku, i-lid flip ngokuzenzekelayo, ukushenxisa okuzenzekelayo kunye nezinye izinto nazo zatsala umdla.
Ibango leBasin lihambelana nonyaka ophelileyo
Ukuthandwa kweempawu ezahlukeneyo zesitya bekungatshintshanga ukusukela kunyaka ophelileyo, ngenani elikhulu labanini bamakhaya baseMelika bakhetha ukutshintsha isitya sabo nge-undermount (65%), kulandele ikhefu (17%) kunye nezitya zokubala (9%) . Ukongeza, i-68% ikhethe ukusebenzisa isitya esiphindwe kabini, esimalunga nepesenti efanayo neminyaka emibini edlulileyo.
UkuGcinwa kwaManzi, ii-Faucets zeSensor ziyinkxalabo enkulu
Amashumi asibhozo anesixhenxe eepesenti abo bonke abaphendulayo bathathe indawo yeepompo zabo. Kwabo bathathe indawo yoompompo babo, iipesenti ezingama-48 zabanini bamakhaya zazinombhobho omtsha omnye onobugcisa obuphezulu. Phakathi kwabo, i-28% yeefompu ezintsha zabaphenduli zinempawu zokonga amanzi, iipesenti ezi-4 zingaphantsi kunonyaka ophelileyo; I-16% yabanini beefompu ezintsha abazincamathiseli iminwe; I-5% yeepompo ezintsha zinokungachukumiseki, eli nani lenyuke ngamanqaku eepesenti ama-2 kunyaka ophelileyo, kubonisa ukuba iimpompo zesivamvo ziyanda.
Izibane ze-LED, Ukungena kwi-Bath Mirror ekhethiweyo Iimbonakalo
Kwizipili, iipesenti ezingama-20 zikhethe iimveliso ezinokukhanyiswa kwe-LED, iipesenti ezintandathu zepesenti ngaphezulu kunonyaka ophelileyo, kwaye bekukho nemfuno ethile yokuzikhusela, ngepesenti ye-14 ekhetha iimveliso ezineli nqaku.
- Igumbi lokuhlambela -
IleIthayile isengona ndawo iphambili yokuhlamba indawo
Ngokujikeleze ukulungiswa kweendonga zeshawari kunye nemigangatho, elona nani likhulu labantu bakhethe iimveliso zethayile, kunye ne-70% ekhetha iithayile zodonga, ukonyuka kwamanqaku eepesenti ezi-4 ngonyaka. Zombini iindonga kunye nomgangatho, ngaphezulu kwe-10% yabantu bakhetha i-marble, kodwa ukhetho lweemabula kumgangatho luye lwancipha ngamanqaku eepesenti ezi-5, kubonisa inani elikhulayo labantu abajonga imiba yokhuseleko kwigumbi lokuhlambela.
Iindawo ezingashukumiyo zaqala kwiindonga zokuhombisa ezithandwayo
Kwiindawo ezingezizo ezokuhlambela kwigumbi lokuhlambela, abantu abaninzi bakhethe ukubuyisela iithayile ngemveliso yokuhombisa ngakumbi kunendawo yokuhlamba, nge-77% yabaphenduli bekhetha ezi mveliso, ziphezulu kakhulu kune-26% ezikhethe iithayile. Nangona kunjalo, kwiindawo ezingashawiyo emgangathweni, elona nani likhulu labantu (iipesenti ezingama-59) lisakhetha ukusebenzisa iimveliso zethayile.
Uhlobo oluDlulileyo lweNdlela
Kulo nyaka, iipesenti ezingama-20 zabaphenduliyo bathi bazokukhetha isitayile sangoku sokuhlambela, inani elifanayo nango-2019 kunye neepesenti ezi-5 eziphezulu kunango-2018, ebonisa ukuba isimbo sanamhlanje sihlala sisesona sikwindawo yoyilo lwaseMelika. Oku kuthelekiswa neepesenti ezili-18 zabanini bamakhaya abakhetha ukuTshintsha, behle ngeepesenti ezi-3 ukusuka ngo-2019, ngelixa inani labantu abakhetha iMihla ngemihla, eyeMveli neyoMfundisi zizinzile kwaye zisonyukile kunyaka ophelileyo.
Umhlophe uhlala ungaphezulu.
Ngokwembala, umhlophe uhlala ungumbala obalaseleyo, nabantu abaninzi bekhetha umhlophe njengowona mbala uphambili wekhabhathi zangasese, imiphezulu yeetafile, iindonga zeeshawari kunye neendonga ngokubanzi. Kwiitafile, ngaphezulu kwe-51% yabaphenduli bakhethe abamhlophe, ngaphambi kombala (15%), ngwevu (14%) kunye ne-beige (9%), kunye nenani labaphenduliyo abakhethe ukuhla kombala ngamanqaku eepesenti ezi-4.
▌8 Kwabaphenduli abali-10 bakhethe ukutshintsha ukukhanya kwabo kwegumbi lokuhlambela.
Kulo nyaka, aba-8 kwabali-10 abaphenduliweyo bakhethe ukuhlaziya izibane zabo zangasese. Phakathi kwazo, ukhetho olukhulu lwezibane ezixhonywe eludongeni (58%) kunye nezibane ezigqityiweyo (55%), kulandele izibane zeshawari (32%), izibane zabalandeli (25%), izibane zesipili (17%), apho ukhetho izibane zesipili zonyuke ngeepesenti ezi-4 ngaphezulu konyaka ophelileyo, kufanelekile ukuba ziqwalaselwe ziikhabhathi zangasese kunye nabavelisi besipili sokuhlamba.
Amanye amanqaku -
1, Ixabiso eliphakathi lokuhlaziywa kwendawo yangasese yabanini bamakhaya base-US yi- $ 8,000, malunga ne-RMB 53,000.
2, Phambi kokulungisa igumbi lokuhlambela, i-69% yabaphenduli bathi sele bengonelisekanga yindawo yokuhlambela yakudala, ukusuka kwi-59% kwi-2019.
3, izikhalazo zabanini bamakhaya baseMelika malunga neendawo zabo zokuhlambela zimalunga nendawo engagciniyo yokugcina (34%), indawo encinci kakhulu yeshawari (34%), ukukhanya okungonelanga (29%) kunye nendawo yokubala elinganiselweyo (25%).
I-4, i-59% yabaphenduli bathe bayokuphumla kwigumbi lokuhlambela, ukonyuka kwamanqaku eepesenti ezi-4 ukusukela kunyaka ophelileyo.
5, Malunga nekota ezintathu zabaphenduli banezibuko ezibini nangaphezulu kwigumbi lokuhlambela eliyintloko.
I-6, i-Fourths yabaphenduli iya kuqesha ingcali ukuba incede ekuvuseleleni igumbi labo lokuhlambela, kunye nabahlaziyi abanezinga eliphezulu lokuthatha inxaxheba kwiipesenti ezingama-43, zilandelwe zizinto zokuhlambela (iipesenti ezingama-20) kunye nabaqulunqi bezindlu zangasese (iipesenti ezili-12)
Ngaphambili :: Ukhethwe yi-NASA, Ezi zindlu zangasese zintathu ziya eNyangeni! next: Yintoni omele uyenze xa uthenga i-Faucet yasekhitshini
QHAGAMSHELANA NATHI I-imeyile: sale@wowowfaucet.com